စန္ဒကူးနံ့သာ ကျောင်းတော်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » စန္ဒကူးနံ့သာ ကျောင်းတော်ရာ	8
Posted by manawphyulay on Jul 26, 2013 in Photography, Travel | 8 comments
ခရီးသွားရခြင်းသည် စိတ်ကို လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗဟုသုတများ ရရှိစေပြီး အေးချမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကျောင်းတော်ရာ ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ စန္ဒကူးနံ့သာပင်များ
ခင် ခ says: ကျွန်တော် မရောက်ဖူးသေးဘူးဗျ။
အခုလို ပုံလေးတွေ တွေ့ရ ဖူးရလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဇာတိက ရေနံချောင်း
ကျောင်းတော်ရာ ကို ခုထိ မရောက်ဖူးသေးဘူး …
သွားရဦးမယ် .. ဒီတစ်ခါ ရွာပြန်ရင် ….
Shwe Ei says: ခလေးဘ၀တုန်းက တခေါက်ဘဲရောက်ဖူးတာ…သွားချင်သေးတယ်ဗျာ
padonmar says: အဲဒီငါးကြီးတွေ မြင်ဖူးချင်ပါတယ်။
ဈေးဆိုင်က ယပ်တောင်လေးတွေလည်း ၀ယ်ချင်ပါတယ်။
Foreign Resident says: မရောက်ဖူးသေးဘူး ။
တစ်နေ့ သွားရမယ် ။
kyeemite says: ရေနံချောင်းနေတုန်းက ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်
manawphyulay says: ယခုလို ၀ါတွင်းအချိန်ကို အရမ်းသွားချင်ခဲ့မိပါတယ်။ သွားတိုင်းလည်း ၀ါတွင်းမဟုတ်တော့ ဘုရားငါးတွေကို မမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူး။ ခုဆို ရောက်နေလောက်ပြီပေါ့။ ဘယ်ချိန် ဘယ်အခါပဲသွားသွား ထပ်သွားချင်သော နေရာလေးတစ်နေရာပါရှင်။
Ma Ma says: ရောက်မလိုလိုနဲ့ တေ့လွဲလွဲနေခဲ့ပေါင်းများပြီ။
သွားဖို့ မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခု။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.